ကျော်ကြားမှုကို အသုံးချပြီး ပရိသတ်တွေ အထင်လွဲအောင် ပြုလုပ်ခံရဖူးကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မင်းမော်ကွန်း – Cele Posts
ကျော်ကြားမှုကို အသုံးချပြီး ပရိသတ်တွေ အထင်လွဲအောင် ပြုလုပ်ခံရဖူးကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မင်းမော်ကွန်း
ပရိသတ်ကြီးရေ နိုင်ငံကျော်မင်းသားချော မင်းမော်ကွန်းဟာဆိုရင် အနုပညာလောကမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသား တစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားတွေသမီးတွေရယ် ချစ်ဇနီးလေးရယ်နဲ့ ဘ၀ကိုပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနေသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်းကတော့ အနုပညာလောကထဲကို ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်ကတည်းက ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အကယ်ဒမီဆုကြီးတစ်ဆုကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားကာ ယခုချိန်အထိ အောင်မြင်မှု အရှိန်အဟုန်ရနေဆဲ မင်းသား တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းမော်ကွန်းက ဒီတစ်ခါမှာတော့ ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာ ပရိသတ်တွေ အထင်အမြင်လွဲစေလောက်တဲ့ အသုံးချမှုတွေခံ ခဲ့ရဖူးကြောင်း ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်းက“ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်ဆိုတဲ့သဘောသဘာဝကိုက ဇာတ်ကားကြည့်တဲ့အချိန်မှ ပရိတ်သတ်ကို surprise ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်တာပါခင်မျာ။ ဧည့်သည်အဖြစ် ကူညီရိုက်ကူးပေးသော အနုပညာရှင်ရဲ့နာမယ်ကိုအသုံးချပြီး ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ဖို့ ကြော်ငြာဖို့ ဇာတ်ကားလူကြည့်များအောင် အသုံးချဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက် နာမည်တွေကို ကြိုတင် မကြော်ငြာခြင်းဟာ ရိုးသားခြင်းသာဖြစ်ပြီး မလေးမစားပြုခြင်း မဟုတ်ပါခင်မျာ။ ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ဧည့်သည်ဘယ်သူဘယ်ဝါ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြု title တွေထိုးရမှာပါ။ ဧည့်သည် အဖြစ်သာပါဝင်တဲ့ အနုပညာရှင်ရဲ့ နာမည်နဲ့ ကျော်ကြားမှုကို အသုံးချကြော်ငြာပြီး ဇာတ်ကားထွက်လာမှ ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်မှန်း သိရတာမျိုးကသာ ပရိတ်သတ်ကို ရော၊ ဧည့်သည်အဖြစ်ပါဝင်ကူညီတဲ့ အနုပညာရှင်ကိုရော လိမ်လည်စော်ကားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။”
“PS . ဒီဇာတ်ကားက ကျွန်တော် ထုတ်လုပ်တဲ့ ဇတ်ကားမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ဧည့်သည်အနေနဲ့ ကူညီပေးပြီး တကယ့် main casting လို မျိုးကြော်ငြာပြီး အသုံးချခံခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ မပြောပေမယ့်လည်း စိတ်တော့မကောင်းလို့ပါ။ တစ်ချို့ပရိတ်သတ်တွေကျတော့ ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခန်းနှစ်ခန်းပါပြီး လုပ်စားသွားတယ် ထင်ကြတာပါ” ဆိုပြီး သူပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “အရုပ်ကျရာဆေးစက်ထင်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အကြောင်းကို ပြောလာပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
Source: Kyaw Kyaw Htay Lwin ‘s fb
ကြျောကွားမှုကို အသုံးခပြွီး ပရိသတျတှေ အထငျလှဲအောငျ ပွုလုပျခံရဖူးကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ မငျးမျောကှနျး
ပရိသတျကွီးရေ နိုငျငံကြျောမငျးသားခြော မငျးမျောကှနျးဟာဆိုရငျ အနုပညာလောကမှာ ဒိတျဒိတျကွဲအောငျမွငျမှုတှကေို ရရှိပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မငျးသား တဈလကျပဲဖွဈပါတယျနျော။ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သားတှသေမီးတှရေယျ ခဈြဇနီးလေးရယျနဲ့ ဘဝကိုပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးနသေူ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ မငျးမျောကှနျးကတော့ အနုပညာလောကထဲကို ဆယျကြျောသကျ အရှယျကတညျးက ဝငျရောကျခဲ့ပွီး အကယျဒမီဆုကွီးတဈဆုကို လကျဝယျပိုငျဆိုငျထားကာ ယခုခြိနျအထိ အောငျမွငျမှု အရှိနျအဟုနျရနဆေဲ မငျးသား တဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဝါရငျ့သရုပျဆောငျ တဈယောကျဖွဈတဲ့ မငျးမျောကှနျးက ဒီတဈခါမှာတော့ ရုပျရှငျလောကထဲမှာ ပရိသတျတှေ အထငျအမွငျလှဲစလေောကျတဲ့ အသုံးခမြှုတှခေံ ခဲ့ရဖူးကွောငျး ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။မငျးမျောကှနျးက“ဧညျ့သညျသရုပျဆောငျဆိုတဲ့သဘောသဘာဝကိုက ဇာတျကားကွညျ့တဲ့အခြိနျမှ ပရိတျသတျကို surprise ဖွဈစရေနျ ရညျရှယျတာပါခငျမြာ။ ဧညျ့သညျအဖွဈ ကူညီရိုကျကူးပေးသော အနုပညာရှငျရဲ့နာမယျကိုအသုံးခပြွီး ဈေးကှကျခြဲ့ထှငျဖို့ ကွျောငွာဖို့ ဇာတျကားလူကွညျ့မြားအောငျ အသုံးခဖြို့မဟုတျတဲ့အတှကျ နာမညျတှကေို ကွိုတငျ မကွျောငွာခွငျးဟာ ရိုးသားခွငျးသာဖွဈပွီး မလေးမစားပွုခွငျး မဟုတျပါခငျမြာ။ ဇာတျကားထဲမှာတော့ ဧညျ့သညျဘယျသူဘယျဝါ ကြေးဇူးတငျကွောငျး အသိအမှတျပွု title တှထေိုးရမှာပါ။ ဧညျ့သညျ အဖွဈသာပါဝငျတဲ့ အနုပညာရှငျရဲ့ နာမညျနဲ့ ကြျောကွားမှုကို အသုံးခကြွျောငွာပွီး ဇာတျကားထှကျလာမှ ဧညျ့သညျသရုပျဆောငျမှနျး သိရတာမြိုးကသာ ပရိတျသတျကို ရော၊ ဧညျ့သညျအဖွဈပါဝငျကူညီတဲ့ အနုပညာရှငျကိုရော လိမျလညျစျောကားခွငျးမြိုးဖွဈပါတယျ။”
“PS . ဒီဇာတျကားက ကြှနျတျော ထုတျလုပျတဲ့ ဇတျကားမဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ကိုယျတိုငျ ဧညျ့သညျအနနေဲ့ ကူညီပေးပွီး တကယျ့ main casting လို မြိုးကွျောငွာပွီး အသုံးခခြံခဲ့ရတဲ့ ဇာတျကားတှေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ မပွောပမေယျ့လညျး စိတျတော့မကောငျးလို့ပါ။ တဈခြို့ပရိတျသတျတှကေတြော့ ကြှနျတျောတို့ကတဈခနျးနှဈခနျးပါပွီး လုပျစားသှားတယျ ထငျကွတာပါ” ဆိုပွီး သူပါဝငျ သရုပျဆောငျထားတဲ့ “အရုပျကရြာဆေးစကျထငျ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီး အကွောငျးကို ပွောလာပါတယျနျော။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ။
အဖမ်းခံရတဲ့ ခြိမ့်ကေကို ဘက်ကနေ အားပေး ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ အောင်ရဲလင်း
ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုအတွက် တစ်နှစ်ကျော်လောက် ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးကို စွန့်လွှတ်ရတော့မှာမို့လို့ ၀မ်းနည်းနေတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း
တစ်ဦးတည်းသော မြေးရတနာလေး Shandraရဲ့ ရက်(၁၀၀)ပြည့်...
ချစ်ရတဲ့အဖေဖြစ်သူရဲ့ မွေးနေ့မှာ အမှတ်တရမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးကို သတိတရနဲ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်း
သူမရဲ့အဖိုးတန်အိမ်လေးကို ရောင်းချတော့မယ့်အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ခင်မို့မို့အေး
တစ်ဦးတည်းသော မြေးရတနာလေး Shandraရဲ့ ရက်(၁၀၀)ပြည့် မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ တန်ဖိုးများစွာရှိတဲ့ စာအိတ်လေး(၃)ခုကို ပေးခဲ့တဲ့ စည်ဖြိုးမိခင်
အရင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်အနှောက်အယှက်လာပေးသူတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားပြန်လည် တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဇာဇာထက်
အစာအိမ်ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံမှာ ရုတ်တရက်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ သရုပ်ဆောင်ခင်သဇင်